မျက်လုံးအမြင်စွမ်းရည်နှင့် မျက်စိကျန်းမာရေးထိမ်းသိမ်းနည်း | MM Cities
HomeBlogsMMcities's blogမျက်လုံးအမြင်စွမ်းရည်နှင့် မျက်စိကျန်းမာရေးထိမ်းသိမ်းနည်း
Health & Beauty Apr 10,2017 1380MMcities
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ မျက်စိသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ခံစားချက်များ အတွေးများကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖော်ပြနိုင်သော အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေသောဓါတ်သတ္တုများမှာ အိုမီဂါ ၃၊ ဇင့်၊ lutein ဓါတ်၊ ဗီတာမင် စီ နှင့် ဗီတာမင် အီး တို့ဖြစ်ပါသည်။
အလေ့အကျင့်ကောင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ၇ နာရီ ၈ နာရီကြား လုံလုံလောက်လောက်အိပ်ပါ။ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မျက်စိလေ့ကျင့်ခန်းပုံ (၁၆) ပုံကို ပြုလုပ်ပါ။ မျက်စိကို ပုံတွင်ပြထားသည့် နေရာများအတိုင်း အမှတ်စဉ် (၁) မှ (၆) အထိ ဖြည်းဖြည်းချင်း နှိပ်နယ်ပါ။ နေရောင်ခြည်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ နေပူထဲသွားလျှင် ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်း၊ ထီးဆောင်းခြင်း၊ နေကာမျက်မှန်တပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါ။ နေရောင်ခြည်ထဲတွင် ပါဝင်သော UV အလင်းရောင်သည် မျက်လုံးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ မျက်လုံးကို ကွန်ပြူတာများ၊ ဖုန်းများ၊ တီဗွီများအား အကြာကြီး မကြည့်ပါနှင့် လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့် ဖန်သားပြင်ကြည့်ပြီးတိုင်း နှစ်မိနစ်၊ သုံးမိနစ်ခန့် နားပေးပါ။ ရေချိုးသောအခါ၊ မျက်နှာသစ်သောအခါတွင် မျက်စိမှိတ်ပြီး မျက်ခွံနေရာကို သေချာဆေးကြောပါ။ ရေအေးနှင့်ဆေးပေးခြင်းက သန့်စင်ခြင်းအတွက် ပိုကောင်းပါသည်။ အကယ်၍ သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေလျှင် ရေနွေးနှင့်ဆေးပေးပါ။ မျက်စိကို တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ခန့် မျက်စိပါဝါကို စစ်ဆေးပေးသင့်ပါသည်။
9 Ways To Improve Eyesight And Keep Good Eye Health
Eyes are one of the most crucial channels that we use to gather information and interpret what is happening around us. Besides, eyes can be an utterly powerful tool to express our feelings and thoughts, and they are often way stronger than spoken words. Despite its importance in our life, we usually do not treat them with enough care and attention.
Below there are few methods that can help us maintain our eye health and improve our vision.
A well-balanced diet leads to good eye health. Nutrients like omega-3 fatty acids, zinc, lutein, vitamins C and E are vitally good for eyesight.
1.GET ADEQUATE SLEEP
Good vision is directly associated with adequate rest and quality sleep. A regular non-interrupted sleep of 7-8 hours is required for healthy eyes
2.TAKE EYE EXERCISES
These 16 basic well-known exercises are recommended for our eye workout. Do them each day in the order indicated.
3.DO EYE MASSAGE
Give our eyesamassage with the help of gentle circular motions. Move through points 1 to6as shown in the image below.
4.AVOID DIRECT SUNLIGHT
Always wear sunglasses while out and about in bright sun light. Sunglasses help us protect our eyes from the sun’s ultraviolet (UV) rays, which can cause cataract formation and macular degeneration.
5.DO NOT OVERSTRAIN OUR EYES
We should avoid overusing our eyes. After working for too long onacomputer, tablet or mobile phone, we should try to rest our eyes by takinga2-3 minute break from the screen every 45 minutes and try to look at something with color green. Besides, also try frequent blinks as they help to wet our eyes and avoid irritation.
6.CLEAN OUR EYES
Our eyes should always be clean and hygienic. The best way to clean our eyes is to clean them with fresh water. If our eyes feel exhausted, wash them with warm water.
7.USE SAFETY EYEWEAR
Always remember to keep our eyes away from chemicals or any harmful substances. If we happen to use hazardous or airborne materials, wearing safety glasses or protective goggles isamust.
8.HAVE REGULAR EYE TESTS
Everyone needsaregular eye exam regardless of their age. It is recommended that we should have our eyes checked once in every two years. A properly scheduled eye test can identify any early indications of eye diseases, which enables us to treat them on time.
၉၈ % သော ကင်ဆာဆဲလ်ကို ၂ ရက်အတွင်း သေစေနိုင်သော ဒန့်သလွန်အမြစ်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များ ရှာတွေ့။
ကြောင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါများ
အာရှ တော်ဝန်ဆေးရုံ M.D ဒေါက်တာ မြတ်သူ နှင့် အသေးစိတ် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ချင်းတိုင်းရင်းသား ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူကို NLD ၏ သမ္မတလောင်းအဖြစ် အမျိုးသားလွှတ်တော်၌ အမည်စာရင်းတင်